IZIXHOBO EZITSHA ZOKUTHATHA INXAXHEBA
Date:28 May 2018 Author: Lindsey Schutters Tags:Empowerment Issue, isiXhosa, New tools of Engagement, samsung, Samsung DeX
Izixhobo ezifanelekileyo ezi-ofisini ekuhlangabezeni ubume bekhondo lomsebenzi wala maxesha
Malunga nezigidi ezine zabantu abasebenzela emakhaya kwisiqingatha sexesha e-US, ngokwengxelo yonyaka ka-2017 ye-Global Workplace Analytics. Le sisi-2,9 sepesenti yabo banemisebenzi esisigxina abaya kude rhoqo kwakunye ne-115 pesenti eyonyukileyo ukususela ngonyaka ka-2005. Oku kudlala ngqo kwisicwangciso-qhinga sokuhlangula amaxabiso kumashishini anendawo ephunguliweyo yokusebenzela nokurenta kukonke. Umhlola ngowokuba, kwale ngxelo ibonise abantu abaya kude ingabo baneminyaka enobudala obungaphezulu kwama-35.
Eli qela ngokweminyaka ingangabo basebenzi ezi-ofisini baphuma kwixesha le-Frank Duffy. U-Duffy wafumana ifem yocwangciso lwendawo emanyeneyo yokusebenzela i-DEGW ngonyaka ka-1971 ukunceda iinkampani ukuze ziphucule indlela ezisebenza ngayo ngokulungelelanisa indawo yokusebenzela kwisicwangciso-qhinga samashishini kwakunye neemfuno zabantu. Ikowuthi yakhe eyaziwa kakhulu ayihambelani ncam nale ntsingiselo ekhoyo yee-ofisi.
U-Duffy ukholelwa ekubeni i-ofisi esebenzayo iya kunika umsebenzi: “ifestile anako ukuyivula, umnyango akwaziyo ukuwuvala kwakunye nodonga abanokulubetha.”
Kwakunye ngabanye awafumanisa oku nabo – nabo wayefunda nabo e-Architectural Association – u-Peter Ely, Luigi Giffione no-John Worthington, ubuchule bokuqhutywa kophando e-DEGW kuyilo lwe-ofisi lwaguqula iindawo zokusebenzela ezinesiphelo esiphezulu. Indlela yobunzululwazi befem kuyilo ivumele ubukrelekrele kwizakhiwo ekubeni zibe nemfesane kwimiba yeminye imibutho. Uyilo oluchaziweyo lwaze lwenziwa kwiingqiqo zamashishini njengemephu yemisebenzi nolwabiwo lwexesha, nokuquka abasebenzisi ekulawuleni indawo enogxininiso kulawulo lwezibonelelo njengeyona nto iphambili kwimpumelelo yolwakhiwo olukhulu.
Le fem yathathwa ngu-Davis Langdon ngonyaka ka-2009, yaze yavala ngokukhawuleza inkonzo yoyilo ukuze ibe yi-arhente yeengcebiso. Ukususela ngoko, intsingiselo yaba kukusuka kwindawo ekusetyenzelwa kuyo. Futhi kwale ntsingiselo yanyanzelisa iinkampani ze-hardware ukuba zandise imbono yendawo yokusebenzela yala maxesha, kuba ii-odolo zekhompyutha ezisezidesikeni zaphelelwa njengoko isizukulwana X saphuma ngomnyango.
Ii-Laptop zijike zayeyona nto isetyenziswayo ekutshintsheni kwenkulungwane. Kwalandela inguqulelo ye- Ultrabook revolution. Kule mihla, 2-in-1s zezona zihambela phezulu. Kodwa kubonakala ngathi iminyaka yekhompyutha yakudala iphelelwe tu. Kuphela lushishino lwe-gaming olusabanga iikhompyutha ezibekwa phezu kwedesika nee-laptop ezinamandla angaphaya. Umntu nje oqhelekileyo ozama ukwenza umsebenzi wosuku mhlawumbi ne-Neflix ebusuku – mhlawumbi kwakwibhetri enye yokutshaja – ngoku bajongene nezikrini ezikhulu kwii-smartphones zabo. Iinkampani ze-hardware ziyasokola ekuziseni elona xabiso likhulu lesikrini esihambelana nobukhulu bomzimba.
Enye yezonkampani ze-hardware ezama ukuchaza isixhobo esilandelayo sendawo yokusebenzela ngabakwa-Samsung. Ukwaziswa kwe-screen-to-body ratio Galaxy S8, inkampani yazise i-DeX Station, idokhi etshintsha i-smartphone sibe yi-desktop enento yonke epheleleyo.
Oku kuyavakala, njengoko ii-mobile processor zicela umngeni zikodlula i-desktop-grade silicon ngamandla nokusebenza kakuhle.
“Ndicinga ukuba indawo yokusebenzela kude iba yinto enkulu. Abantu abanamashishini asakhulayo afuna ukuhlala enemveliso nokuba baphina. Kwakunye namashishini amakhulu, ayakuqonda ukuba abantu bangoku bafuna inkululeko ukuze bakwazi ukujongana nabaxhasi kulo ndawo bakuyo futhi bakwazi ukusebenzisa ixesha elilelabo ukuze baphumelele, ucacise watsho u-Craig Fleischer, usekela-prezidanti we- integrated mobility e-Samsung South Africa. “Ngokwengqiqo yexabiso eMzantsi Afrika, i-hot desking iba yinto ekhoyo kumashishini amakhulu ngenxa yendawo. Nabalawuli ngoku bahlala kwii-ofisi ezivulekileyo ngenxa yokuba ukuba nendawo elungiselelwe i-ofisi ayiseyomfundo yokuba nemveliso entle. Njengombutho (inkampani) yobuchwepheshe, sifuna ukunikezela izixhobo ebantwini ukuze babe neziphumo ezihle.”
U-DeX kutshanje uphindaphinde ukuqaliswa kwe-Galaxy S9. I-DeX Pad entsha ilungise yonke imiba ehambelana neprojekthi engumhlahlandlela. Okubaluleke kakhulu, inikezele nge-headphone jack, ukuze abasebenzisi bangakwazi ukukhebhula nzima kwisipika sangaphandle (awukwazi ukufikelela kwi-headphone jack kwi-Dex Station kuba ijonge phantsi ngqo kwisiseko sesihlalo).
Uhlaziyo lwesoftwe ehamba noku nayo evumela ifowuni ukuba isebenze njenge-trackpad ukuze ngoku ufune ukwenza amalungiselelo kuphela e-keyboard.
“Siyabona ukuba ixabiso lokumisa indawo eyi-ofisi yenza kube nzima ebantwini, kengoko baqalise ukusebenzela kwiindawo ezingezinye njengeendawo ekwabelwana ngazo okanye iivenkile ezithengisa ikofu, okanye bakwikona yegumbi lokutyela,” utshilo u-Fleischer. “Bafuna ukuqhuba ishishini baze babukeke njengeengcaphephe zomsebenzi ngendlela ababonakala ngayo kwihlabathi lilonke jikelele.”
U-Samsung ubonakala ngathi ukhe wakhubeka kushishino oluhambela phantsi lwabanini bamashishini asakhulayo waze waqala apho ikapitali iphantsi kakhulu, kodwa izibonelelo ze-IT zibanga izibonelelo zomsebenzi eziphezulu, nogxininiso kwi-mobility.
“Aba baxhasi bafuna ukwazi ukuguquguquka kwaye sinikezela izixhobo kubo zokwenza njalo. Sifumanisa ukuba abantu abasebenzisi nje idata kuphela kwiifowuni, ngoku baqalisa ukuyila umxholo omninzi. Yiyo lento sizise ngaphambili i-DeX.”
Kunqabile ukuba isicwangciso-qhinga kukuthengisa iinguqulelo zombini ze-DeX zihamba kunye. Umyalezo kukuba i-Station sisendaweni esisigxina, okanye ke, sisendaweni ezinzileyo ngenxa ye-ethernet port. Zombini zifuna umbane (ingakumbi kwi-adapter yase-Samsung etshaja ngokukhawuleza) kwakunye nedispleyi ye-HDMI ukuze isebenze.
“Makhe ndichaze umahluko. I-Station sivula ngokuflipha kwaye sikhangeleka njengesitendi esiqhelekileyo sedesika. Ngoku usafuna i-keyboard ne-mouse, kwakunye ne-monitor. Nayiphina i-monitor ye-HDMI ingasebenza, kodwa uya kufuna izixhobo ezibini ezongezelelweyo ze-input.
“I-DeX Pad kwelinye icala yenza ukuba uthathele i-mobility kwelinye izinga ngokususa imfuno ye-keyboard ne-mouse, size iskrini efowunini yakho sibe sisixhobo se-input. Kodwa oku kuyakuvumela ukuba ufuna ukufumana la desktop yakho iphelele, ukwenza zonke iimpawu nge-keyboard yangaphandle.”
Sichithe amaxesha amaninzi sixhomekeke kuphela kwisixhobo se-DeX-compatible Galaxy kuzo zonke iimfuno zethu zekhompyutha kwaye iziphumo bezithandeka zizonke. Inkqubo ijongene nemisebenzi iyonke ngokufanelekileyo, ngaphandle nje kwengxaki enye yokungambiselani neseva yemagazini yethu. U-Fleischer ukhe wajongana neengxaki zokuzama ukungenelela kuthungelwano lwengingqi le-office yase-Samsung.
U-Office 365 usebenza kakuhle kakhulu nale nkqubo ukuba unomrhumo (subscription) kwaye ne-1 TB yamahala ye-OneDrive space othi uyifumane yindawo entle kakhulu yokugcina yonke imifanekiso yakho oyithathileyo. Kodwa i-Office app iba kwi-full desktop mode xa isetyenziswa kwi-DeX. Unganesixhobo esinye kuphela sokwenza lonke ushishino lwakho.
Ngamanye amaxesha, thatha isihlalo
Nantsi into: indawo yokusebenzela ngenene asiyondawo engcono yabantu.
U-Dr Josephine Chau weYunivesithi yase-Sydney’s School of Public Health wenze ufundo ngonyaka ka-2015 olwafumanisa ukwanda okukhulu kumandla ewonke abasebenzi abanethuba lokuchitha ama-60 ukuya kuma-90 emizuzu bemile emsebenzini
“Bachaze ukuba boneliseke kakhulu kwaye baziva benemveliso enkulu emsebenzini. Ukongeza, umlinganiselo wabasebenzi abachaze ukuba banamandla angaphaya imini yonke kwande ngokuphindaphindwe kasixhenxe, ukusukela kwisithandathu ukuya kuma-44 pesenti, xa bephakama baphinde bahlale xa besebenza,” utshilo.
Uyakwazi ke ngoku okwenziwayo. Kukho uphando oluninzi oluchaza ukuhlala kakhulu edesikeni okubangela ingozi enkulu yokuba nezifo ezinjengokutyeba okungaphaya, isifo sentliziyo kunye nesifo seswekile uType 2. Ukuhlala phantsi kukutshaya okutsha, kutshiwo, kwaye oku kubaluleke kakhulu kwizigidi ngezigidi zabantu abasebenza behleli phantsi. Kodwa isisombululo kule ngxaki asikho lula njengokusuka uphakame.
“Ukuhlala endaweni enye – nokuba umile, uhleli phantsi okanye uphantsi komthi – lonke ixesha kubangela zonke ezi ngozi zinxulumene nempilo yakho. Wonke umntu uthi ukuhlala phantsi kukutshaya okutsha; akunjalo. Kukuba sendaweni enye ixesha eli lilonke.” La ngamazwi ka-Dale Higgins, uMlawuli we-international sit/stand sales director yase-Humanscale, osebenzisana ne-Formfunc ekunikezeleni ifenishala ekumgangatho ophezulu ye-ergonomic eMzantsi Afrika. Inkampani iqhube uvavanyo kumgqatswa ongumsebenzi apho bamise khona idesika yakhe kumlinganiselo wokuma baze bathatha isitulo sakhe.
“Uvile ngemilenze ye-shop-steward? Ufumana i-calcium eyakheka emilenzeni yakho eyenza kungavakali kamnandi xa uhamba okanye umile. Amazantsi omqolo wakhe aqalisa ukuphela ngenyanga yesine. Ebengqiyama ngengqiniba yakhe ixesha elide kangangoku uzenzele isikhumba esilukhuni. Oku kudlala kwimithetho yentlalo yomntu wonke ukuba ingxaki isekula ndlela ubume ngayo ngalo lonke ixesha,” ucacisile u-Higgins.
U-Humanscale ngokwangoku kuphela komvelisi wefenishala yase-ofisini kwihlabathi lilonke onesiqinisekiso esaziwa njenge-Living Product (LPC) certification kwenye yeefektri zakhe. Indawo yokusebenzela e-Dublin ingaphandle komasipala futhi onke amanzi asetyenziswayo kwinkqubo yokuvelisa izinto aphinde asetyenziswe kwakhona kwinkqubo. Inkampani ithathe amanyathelo amakhulu ekunikezeleni imveliso yabo kude ne- formaldehyde esefokuba nobungozi nefumene i-LPC status kuphindaphindo lakutshanje lokuma uphinde uhlale ngokukhawuleza okwaziwa njenge-QuickStand sit/stand desk.
Imfihlo yoku, ikubuchwepheshe besipringi. Akukho nasinye kwizitulo esine-recline lock; endaweni yoko, basebenzisa oomatshini bokuzinza. Isipringi esithe nkqo sisebenzisa ubunzima bakho ekunikezeleni i-recline resistance, into ethetha ukuba, wonke umntu ohlalayo ufumana ngqo isiphumo esinye se-recline.
Obo buchwepheshe bukwagqithiselwa kwizisombululo zokuma/nokuhlala. “Iidesika ze-QuickStand zifumana isipringi esifanayo. Sime nkqo, sikhangeleka njengesipringi esincinci sasegaraji kwaye inzuzo kwimveliso yethu kukuba imisebenzi yokuphakamisa ingakuncedisa nge-16 kg yokuphakamisa. Konke okufuneka ukwenzile kukusebenzisa iikilogram ezintathu, siya kushukuma. Singancedisa abasebenzisi abaneengxaki zomqolo,” utshilo u-Higgins.
U-Formfunc unesivumelwano sokutshintshiselana nothungelwano lwendawo ekwabelwana ngayo i-Cape Town’s Workshop 17. Ii-ofisi zinikwa ifenishala aze u-Formfunc aqhube ishishini kuzo. Ifektri yaseKapa ilapho indibano yengingqi ikhoyo neziko logqithiso kufutshane ne-Lanseria, kufutshane kakhulu nokuphuma kwigridi.
Iindawo zokusebenza ekwabelwana ngazo zisetyenziswa kakhulu kuba zinciphisa kakhulu iingxaki zokuba nendawo ye-ofisi. I-Workshop 17 inazo zonke iibhokisi zala maxesha eziphawuliweyo, kodwa uninzi lweglasi lungaphazamisa kancinci.
“Ubuchule kukufumana iglasi eninzi kuyilo lwe-ofisi ukuzisa okungaphandle ngaphakathi e-ofisini, icacisile i-ergonomist Janice Korte. Usebenzela u-Formfunc kwaye wayeyinxenye ephambili ekusekeni isivumelwano kunye ne-Workshop 17. Akabonakali ngathi unexhala malunga nokukhazimla okuvela eglasini. “Kula maxesha angoku, ii-laptop ezininzi ziza nokhuseleko lokukhazimla kwiskrini kodwa indlela elula yokususa ingxaki kukuma nkqo apho ukukhanya kuvela khona, awusayi kufumana kukhazimla.”
UHumanscale uqalise ukwenza iifiltha ezikhusela ukukhazimla kwizikrini ze-CRT. “Uninzi lwee-laptops kule mihla ziza nokukhanya okuninzi kwiskrini, nokubangela ukukhanya okungaphaya okuvela kwi-pixel,” utshilo u-Higgins. “Iiphaneli ze-IPS ziphakathi kwama-200 nits, kengoko uyakuqhubeka ukubona okuthile kwiskrini nokuba ilanga likhanya kangakanani na.”
Ukuba usebenzela ekhaya, noxa kunganzima ukufaka zonke ezi ndlela zintsha zokwenza indawo osebenzela kuyo ithandeke, kodwa kukho iingcebiso ezimbalwa ezinokubeka endleleni ukuze woneliseke emsebenzini. Eyona nto oyidinga kakhulu ekutshintsheni izinto, xa ukwazi, yi-laptop yakho.
“Iingxaki ne-laptop kukuba awukwazi ukufumana iskrini sihambelane ngqo namehlo futhi ne-keyboard ibesemphethweni wedesika. Kufuneka uzame okuthile ngalo lonke ixesha; ingaba uza kuba nezihlahla ezibuhlungu okanye intamo ebuhlungu? Utshilo u-Josie King, enye i-ergonomist yase-Formfunc. “Ukuba uyakwazi ukwehlula iskrini kwi-keyboard, ungakwazi ukumisa izinto zakho ngokuchanekileyo. Iskrini sidlala indima enkulu kakhulu. Konke kumalunga nesalathiso samehlo akho ukusuka phezulu ukwehla, okanye ukujonga phezulu.”
Ungazalisa imali ngokuthenga isitendi esinokwazi ukuthatha iskrini sesibini. Okanye ungehlisa okungephi kwi- QuickStand Eco ukuze uphile ubomi obungcono bokuma. “Elona xesha lisebenza kakhulu lokuma/ukuhlala kuxa umsebenzisi ecela njalo. Ukuya e-ofisini ufike uphose phantsi iindawo zokusebenzela yindlela elula yokwehlisa izinga lakho lokusebenzisa,” utsho u-Higgins. Ixesha elingcono kuxa omnye umntu eyibonile futhi efuna ukuyizama okanye ukuzizamela.
“Indlela yakho yokuma ingayeyona ndlela ichanekileyo. Kodwa okubaluleke kakhulu xa usuka ekuhlaleni phantsi usiya ekumeni kukuba uyilungisa ngokungaphaya indlela yakho yokuma. Utyhalela isinqe sakho emazantsi ukuya ngaphambili emphethweni wedesika uze ume nkqo amagxa akho engasemva. Ngemveliso yethu, xa uphakama, iyasuka kuwe. Uyakufumana inzuzo eninzi usebenzisa umphetho ongaphambili ukuzixhasa, ingakumbi xa uqalisa ukuhlala. Ukuba woyamile njengoko uqhele ukoyama ebharini ngolweSihlanu ebusuku, ushiyiwe sisikhephe. Kufuneka uzixhase.”
Xa uhlala phantsi, indlela engcono kukuba isikrini sakho sibe kumgangatho wamehlo akho nofikelelo lweengalo. I-keyboard ne-mouse kufuneka zibe kufutshane kuwe okunye kukonke kufuneka ufikelele ngokolula ingalo ungadanga wagobela ngaphambili.
Owu, kukwafuneka ukuba ugobele ngasemva ngendlela efanelekileyo.
“Ingqondo yakho kufuneka itshintshe,” uyalele njalo u-King. “Gobela ngasemva; yeyona ndlela engcono. Ngokugobela ngasemva kakhulu, umqolo wakho uza kufikelela kwindawo ephakathi naphakathi uze usebenze kakhulu kunye nenkxaso yesinqe. Ukuba uhamba ngakwii-ofisi zakwa-Humanscale e-New York, kubonakala ngathi abantu balele kodwa abalelanga. ”
Indawo yokusebenzela yexesha elizayo yile uyenza ichaneke ngawo lo mzuzu. Xa uxhobe ngezixhobo ezichanekileyo kunye nengqondo eme kakuhle, unganemveliso enkulu xa uzivumela ukuba usuka naphina ehlabathini. Yiba kwisithuba onokuziqhusheka kuyo okanye igumbi lescrum, e-ofisini okanye ekhawutshini, zimbalwa izithintelo eziya ekubalaseleni.